अष्ट्रेलियामा यी विद्यार्थीको भयो बिजोग, यस्तो रहेछ कारण
कस्तो अवस्थामा अस्ट्रेलियामा आउन तीन वर्षे प्रतिबन्ध लाग्दछ ?
यस्तो अवस्था रहेको छ भने अष्ट्रेलियामा तपाईले फुलटाइम काम गर्न पाउनुहुन्न ?
मेरी श्रीमती अहिले अकाउन्टिङमा ग्राजुएट डिप्लोमा गर्दैछिन् । यो मास्टर्स् लेभलको कोर्स भएकोले मैले त फुलटाइम काम गर्न पाउँछु नि, होइन?
अष्ट्रेलिया पुगे भन्दैमा यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् ?
मेरो दाइ भाउजु टुरिष्ट भिसामा अस्ट्रेलिया आउनुभएको छ । दाइले केही समय यहाँँ काम गर्ने इच्छा देखाइरहनुभएको छ । म आफूले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा उहाँलाई काम लगाइदिन सक्छु । उहाँले काम गरेको थाहा भयो भने के कारबाही हुन्छ ?
अस्ट्रेलियामा जग्गा किनेर घर बनाउन के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
प्रश्न– हामीले अस्ट्रेलियामा एक टुक्रा खाली जग्गा किनेर घर बनाउने सोच गरिरहेका छौं्र के र कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ला ?
अष्ट्रेलिया विशेषः यस्तो समस्या छ, टिआरका लागि आवेदन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
म २०१० मा अष्ट्रेलिया आएको हुँ । भर्खरै अकाउन्टिङमा ब्याचलर्स डिग्री सिध्याएँ । आइएल्ट्समा हरेक ब्यण्डमा न्यूनतम ५ र समग्रमा ६ स्कोर ल्याएको छु । के मैले टीआरको लागि आवेदन दिन मिल्छ ?
टुरिष्ट भिसामा अष्ट्रेलिया जानेले काम गरेमा यस्तो सजाय हुन्छ
मेरो दाइ भाउजु टुरिष्ट भिसामा अस्ट्रेलिया आउनुभएको छ । दाइले केही समय यहाँँ काम गर्ने इच्छा देखाइरहनुभएको छ । म आफूले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा उहाँलाई
अष्ट्रेलियामा नर्सिङ पढेकालाई पीआर पाउन सजिलो
अष्ट्रेलिया । नेपाली विद्यार्थीहरूमाझ नर्सिङ विषय धेरै नै लोकप्रिय छ । अहिले नै पनि हरेक अस्पातल वा नर्सिङ होममा उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली नर्सहरू कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयहरूमा अहिले नर्सिङ पढ्नेहरूको संख्या पनि धेरै नै छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः पुलिस केसका कारण मैले पीआर नपाउने पो हो कि ?
सिड्नी । पुलिस केस परेको मान्छेले पीआर पाउँदैन रे भन्ने सुनेको छु । साथीहरुसँग रक्सी खाएर झगडा गर्दा मलाई एक रात पुलिसले हिरासतमा लिएको थियो । भविष्यमा मैले पीआरको लागि आवेदन गर्दा यही घटनाको कारण मलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि ?
श्रीमतीसँग डिर्भोस हुने प्रक्रियामा छ, तर म अष्ट्रेलियामा आफै विद्यार्थी भिषामा रहन चाहन्छु, के गर्नु पर्ला ?
म मेरी श्रीमतीसँगै अस्ट्रेलिया आएको छौँ तर अहिले हाम्रो सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ । म आफैँ कलेजमा भर्ना गरेर पढ्न चाहन्छु, तर मेरो अंग्रेजी धेरै नै कमजोर छ । आइएल्ट्स नदिइकनै पनि विद्यार्थी भिषा पाउन सकिने सम्भावना छ ?